China SBS gbanwetụrụ bitumen akpụkpọ ahụ Manufacturers na Suppliers | Hongyuan
gbanwetụrụ bitumen waterproof akpụkpọ
SBS gbanwetụrụ bitumen akpụkpọ ahụ a mere bụ ide isi ke bitumen, ma ọ bụ thermoplastic elastomer (dị ka styrene butadiene-SBS), mesikwuru na polyester ma ọ bụ faiba glaasi, gụchara na elu iru na ezi omume, ịnweta slates (ma ọ bụ ọka) ma ọ bụ polythene akpụkpọ ahụ wdg
Good impermeability; Nwere ezi ike ọdụdọ, elongation ọnụego na size kwụsie ike nke nwere ike-ọma ruru eru mkpụrụ distortion na ịgbawa; SBS gbanwetụrụ bitumen akpụkpọ ahụ na-akpan na-etinyere na oyi na-atụ ebe na ala okpomọkụ, mgbe APP gbanwetụrụ bitumen akpụkpọ ahụ na-etinyere na-ekpo ọkụ na mpaghara na-elu okpomọkụ; Good arụmọrụ mgbochi mgbapu, mgbochi ore, mgbochi ndị na-eguzogide, mgbochi ozize, mgbochi ebù, mgbochi weathering; Construction bụ adaba, gbazee usoro nwere ike ịrụ ọrụ na anọ a kara aka, na nkwonkwo na-pụrụ ịdabere na
PY polyester G Glassfibre PYG Glassfibre welie polyester chere Pee Pee Film S Aja
Na ọdabara akporo:
Adabara obodo ụlọ roofing, ala, mmiri, na-adọba ụgbọala, ọdọ mmiri, ọwara na akara nke waterproofing na dampproof, karịsịa maka ụlọ n'okpuru elu okpomọkụ. Dị na roofing engineering chọrọ, APP gbanwetụrụ bitumen akpụkpọ ahụ nwere ike ga-eji na mezuwo Ⅰ obodo ụlọ na ulo oru ụlọ nke nwere pụrụ iche waterproofing chọrọ.
Nchekwa na njem ntuziaka
Mgbe nchekwa na njem, Dị iche iche na nha nke ngwaahịa a ga-stacking iche iche, na-ekwesịghị-agwakọta. Nchekwa okpomọkụ ekwesịghị ịbụ n'elu 50 ℃, ịdị elu abụghị ihe karịrị abụọ n'ígwé, na N'ezie nke njem, akpụkpọ ahụ ga-eguzo.
The stacking elu abụghị ihe karịrị abụọ n'ígwé. Iji gbochie tilt ma ọ bụ nsogbu, mgbe ọ dị mkpa cover ndị chere ákwà.
Na nkịtị ọnọdụ nke nchekwa na njem, nchekwa oge a afọ kemgbe ụbọchị nke mmepụta
SBS [Ńkwàdó ka GB 18242-2008]
Soluble ọdịnaya / (g / m ²) ≥
Ọ dịghị ire ọkụ
Ọ dịghị eruba, ọ dịghị dripping
Impermeability 30 nkeji
Oke / (N / 50mm) ≥
Ọ dịghị mgbape, ọ dịghị iche
Oke /% ≥
Oil eri eri
Osote: APP gbanwetụrụ bitumen akpụkpọ
App gbanwetụrụ bitumen akpụkpọ ahụ Price
App gbanwetụrụ waterproofing bitumen akpụkpọ
Gbanwetụrụ Polyurethane waterproofing
Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ , Acryli Waterproof mkpuchi, Tpo Waterproof akpụkpọ, Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete , Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi ,
Mgbanwe Polymer-Cement Waterproof mkpuchi , Single-Ply roofing akpụkpọ ahụ , Water Base Polyurethane Waterproof mkpuchi , Acryli Waterproof mkpuchi, Tpo Waterproof akpụkpọ, Polyurethane mkpuchi N'ihi Concrete ,